Ndezvipi Nofollow, Dofollow, UGC, Kana Anotsigirwa ma Links?
Zuva rega rega bhokisi rangu rekudaira rinozadzwa nemakambani epa spam ari SEO ari kukumbira kuisa zvinongedzo mune zvangu zvemukati. Irukova rusingaperi rwezvikumbiro uye runonditsamwisa chaizvo. Heano maitiro eemail anowanzoenda…
Ndakaona kuti iwe wakanyora ino inoshamisa chinyorwa pa [keyword]. Isu takanyora yakadzama chinyorwa pane izvi futi. Ini ndinofunga zvingaite kuwedzera kukuru kuchinyorwa chako. Ndokumbira undizivise kana iwe uchikwanisa kunongedzera chinyorwa chedu chine chinongedzo.
Kutanga, vanogara vanyora chinyorwa sekunge vari kuedza kundibatsira uye nekuvandudza zvemukati kana ini ndichinyatsoziva zvavari kuyedza kuita… isa a Backlink. Nepo injini dzekutsvaga dzakanyatsonongedza mapeji ako zvichibva pane zviri mukati, iwo mapeji anozoenderana nenhamba yemasaiti akakodzera, emhando yepamusoro anoasanganisa.
Chii chinonzi Nofollow Link? Unotevera Chinongedzo?
A Nofollow chinongedzo inoshandiswa mukati meiyo anchor tag HTML kuudza injini yekutsvaga kuti ifuratidze iyi link kana zvasvika pakupfuudza chero chiremera kuburikidza nayo. Izvi ndozvazvinotaridzika muiyo mbishi HTML:
Ikozvino, seinotsvaga injini yekutsvaga inokambaira peji rangu, inonongedzera zvandiri mukati, uye inogadzirisa backlinks kuti ipe masimba kudzokere kune zvinyorwa ... inofuratira iyo nofollow zvinongedzo. Nekudaro, dai ini ndaive ndakabatana kune yekuenda peji mukati mezvinyorwa zvandakanga ndanyora, iwo anchor ma tag haana iwo asina chinhu hunhu. Ndivo vanoshevedzwa Dofollow zvinongedzo. Nokusingaperi, chese chinongedzo chinopfuura chinzvimbo chinzvimbo kunze kwekunge hunhu hwacho hwawedzerwa, uye mhando yeiyi link yakatemwa.
Sezvineiwo zvakaringana, zvisina kubatana zvinongedzo zvinowanzo kuve zvichiratidzwa muGoogle Search Console. Heino chikonzero:
Saka Dofollow Links Chero Kubatsira Yangu Chinzvimbo?
Apo kugona kwekunyengedza chinzvimbo kuburikidza ne backlinking kwakawanikwa, bhizimusi-remadhora indasitiri yakatanga husiku kubatsira vatengi kusimudzira nzira yavo kumusoro kwezvikamu. SEO makambani otomatiki uye akavakirwa kunze batanidza mapurazi ndokutsika gasi kuti ashandise injini dzekutsvaga. Ehezve, Google yakacherekedza… uye zvese zvakawira pasi.
Google yakavandudza maalgorithms ayo kuti aone iro saiti saiti akaunganidza backlinks ne Zvakakodzera, masimba masimba. Saka, kwete… kuwedzera zvinongedzo chero kupi zvako hazvikubatsire. Kugadzira backlinks pane akakodzera uye ane masimba masosi kunobatsira iwe. Zvakapesana neizvi, chinongedzo spamming chingangokuvadza kugona kwako kurongeka sezvo huchenjeri hweGoogle hunogona zvakare kusiyanisa kukanganisa nekukuranga nekuda kwako.
Icho Chinongedzo Chinyorwa Chine Basa?
Kana vanhu vaendesa zvinyorwa kwandiri, ini ndinowanzovaona vachishandisa mazwi akawandisa akajeka mukati memavara avo echisungo Ini zvechokwadi handitendi kuti maGoogle algorithms akareruka zvakapusa zvekuti iwo mavara ari mukati memubatanidzwa wako ndiwo ega mazwi akakosha. Ini handizoshamiswa kana Google ikaongorora zviri mukati menzvimbo iyi. Handifunge kuti unofanirwa kuve pachena nezvako zvinongedzo. Pese paunenge usina chokwadi, ini ndinokurudzira vatengi vangu kuti vaite izvo zvakanakira muverengi. Ndosaka ndichishandisa mabhatani pandinenge ndichida kuti vanhu vaone uye tinya chinobuda.
Uye usakanganwa kuti iyo anchor tag inopa zvese zviri zviviri chinyorwa uye a musoro wenyaya kune yako link. Mazita ekuremekedza hunhu hwekuwanika kubatsira vanoverenga vanojekesa chinongedzo kune vashandisi vavo. Nekudaro, mabhurawuza mazhinji anozviratidzawo. SEO gurus haibvumirane nezvekuti kuisa zita remusoro kunogona kubatsira chinzvimbo chako chemazwi akashandiswa. Chero nzira, ini ndinofunga itsika yakanaka uye inowedzera pizazz diki kana mumwe munhu achisimudza pamusoro pechinki chako uye zano rinoratidzwa.
Ko Zvakadii Nezvinotsigirwa Zvinongedzo?
Heino imwe email yandinogamuchira zuva nezuva. Ini ndinopindura izvi… ndichibvunza munhu wacho kana vari kunyatsondikumbira kuti ndiise mukurumbira wangu panjodzi, ndibhadhariswe faindi nehurumende, uye ndibviswe kubva kumajini ekutsvaga. Chikumbiro chisina musoro. Saka, dzimwe nguva ndinongopindura ndovaudza ndingafarire kwazviri… zvinongovabhadharira $ 18,942,324.13 paslink backlink. Ndichakamirira mumwe munhu kuti aise waya mari.
Ndakaona kuti iwe wakanyora ino inoshamisa chinyorwa pa [keyword]. Tinoda kukubhadhara iwe kuti uise chinongedzo muchinyorwa chako kunongedzera kuchinyorwa chedu [pano]. Zvingadai zvakadharai kubhadhara iyo dofollow link?
Izvi zvinotsamwisa chaizvo nekuti zviri chaizvo kundikumbira kuti ndiite zvishoma zvinhu:
Kutyora Mitemo yeGoogle yeKushandira - varikundikumbira kuti ndivanze chinongedzo changu chakabhadharwa kune vanokambaira veGoogle:
Chero hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupamenzwa kekushandisa PageRank kana chinzvimbo chesaiti muGoogle mitsva yekutsvaga inogona kutorwa sechikamu chechirongwa chekubatanidza uye kutyora kweGoogle Mirayiridzo yeWebmaster.
Zvirongwa zveGoogle Link
Kutyora Federal Mitemo - ivo vari kundikumbira kutyora FTC nhungamiro pane zvibvumirano.
Kana paine kubatana pakati peanotsigira uye mushambadzi izvo vatengi vasingazotarisira uye zvinokanganisa maitiro evatengi kuongorora kubvumidzwa, iko kubatana kunofanirwa kuburitswa.
FTC Endorsement Nhungamiro
Kutyora Vavariro Vangu Vaverengi - varikundikumbira kuti ndinyepere vateereri vangu! Vateereri vandakashanda kwemakore gumi nemashanu kuvaka zvinotevera pamwe nekuwana kuvimba navo. Hazvinzwisisike. Ndozvazviri chaizvo nei uchindiwona ndichizivisa hukama hwese pachinyorwa chese - ingave chinongedzo chekubatana kana shamwari iri mubhizinesi.
Google yaimbobvunza kuti zvinotsigirwa zvinongedzo zvinoshandisa iyo nofollow hunhu. Nekudaro, ivo izvozvi vagadziridza izvo uye vane chitsva chakatsigirwa hunhu kune akabhadharwa ma link:
Maka mamaki ayo ari kushambadzira kana akabhadharwa ekuisirwa (anowanzo kunzi akabhadharwa ma link) neiyo inotsigirwa kukosha.
Google, Inokodzera Zvinobuda kunze
Izvo zvinongedzo zvakagadzirwa seinotevera:
Nei Vasingadzokere shure Vanongonyora Makomendi?
Pakatanga PageRank kukurukurwa uye mablog akaendeswa pachiitiko, kupindura kwanga kwakajairika. Haingori chete nzvimbo yepakati yekuita hurukuro (pamberi peFacebook neTwitter), zvakare yakapasa chinhanho pawakazadza zvinyorwa zvemunyori uye ukabatanidza chinongedzo mumashoko ako. Komenda spam yakazvarwa (uye ichiri dambudziko mazuva ano). Izvo hazvina kutora nguva yakareba zvisati zvaitika zvemanejimendi manejimendi uye ekumisikidza masisitimu akaisa Nofollow zvinongedzo pane zvemashoko emunyori profiles uye makomendi.
Google yatotanga kutsigira chakasiyana chimiro cheichi, ugc. UGC chidimbu cheMushandisi-Yakagadzirwa Zvemukati.
Iwe unogona zvakare kushandisa musanganiswa wehunhu. MuWordPress, semuenzaniso, chirevo chinotaridzika seichi:
Kunze ndechimwe chinhu icho isu vanokambaira vazive kuti chinongedzo chiri kuenda kune zvekunze nzvimbo.
Unofanirwa Kuita Backlink Outreach Kuti Uwane Zvakawanda Dofollow Links?
Ichi chokwadi chokwadi chakakura chekupokana neni. Iwo spammy maemail andakapa pamusoro apa anotsamwisa zvechokwadi uye handikwanise kumira nawo. Ndiri mutendi akasimba aunofanira kudaro wana zvinongedzo, kwete kuvakumbira. Shamwari yangu yakanaka Tom Brodbeck akatumidza zita iri kuti linkearning. Ini ndinobatanidza kuzviuru zvemasaiti uye zvinyorwa kubva kune yangu saiti… nekuti ivo vakawana iyo link.
Izvo zvakati, ini handina chero dambudziko nebhizinesi rinosvika kwandiri uye nekubvunza kana vachigona kunyora chinyorwa chakakosha kune vateereri vangu. Uye, hazvishamise kuti kune dofollow batanidza mukati meichi chinyorwa. Ini ndinoramba zvinyorwa zvakawanda nekuti vanhu vari kuendesa vanopa inotyisa chinyorwa chine pachena backlink mairi. Asi ini ndinoburitsa zvimwe zvakawanda izvo zvinonakidza zvinyorwa uye chinongedzo chakashandiswa nemunyori chingave chakakosha kuvaverengi vangu.
Ini handiite zvekusvikira… uye ini ndine angangoita zviuru gumi nezviuru zvinongedzo zviri kubatanidza kumashure Martech Zone. Ini ndinofunga icho chipupuriro kune mhando yezvinyorwa zvandinobvumira pane ino saiti. Shandisa nguva yako kutsikisa zvinoshamisa zvemukati ... uye backlinks ichatevera.
Tags: backlink kusvikabacklinkingBacklinkskomenda zvinongedzokuzivisadofollowdofollow zvinongedzofederal trade commissionftcgoogle yekutsvaga konigoogle mazwi ebasaGoogle +batanidza kuwanabatanidzo yemhandochinobatanidza-kuvakanofollownofollow zvinongedzoorganic yekutsvaga chinzvimboakabhadhara zvinongedzozvemhando zvinongedzorelrel dofollowrel nofollowrel inotsigirwarel ugcinjini dzekutsvagatsvaga rankingsanotsigirwa maLinksugcugc zvinongedzoWordpress dofollowWordpress hapana
Jan 21, 2007 na1:35 PM
Ndatenda nekunongedza iyo Dofollow plugin Doug. Ini ndaiziva kuti WordPress yakawedzera rel = "nofollow" kune zvinongedzo mune makomendi, uye ini ndinobvumirana nepfungwa yako yekuti chero mazwi ari kutariswa, chero akakodzera malink akasiiwa mumashoko anokodzera kukweretwa kwawo.
Jan 22, 2007 na2:42 PM
Ndatenda nezano; Ndangoisa plug-in (maitiro asingarwadze zvachose.)
Mubvunzurudzo mumwe spammer akati:
"Chirongwa cheGoogle, Yahoo neMSN, chekukudza "usateedzere" chinokunda Sam nevamwe vake here? "Handifunge kuti zvichave zvakanyanya munguva pfupi, yepakati kana yakareba."
Hurukuro yakazara iri pano:
Jan 22, 2007 na5:56 PM
Martin, chinyorwa chikuru. Ndinoshamisika kuti basa rake rave rakaoma sei mugore rapfuura!
Kukadzi 24, 2007 na6:22 PM
Pane nzira yekusarudza kuti ndechipi chinongedzo chandinoda kuti chitevedzerwe (wow, mutauro unoshuvira kuvaka wandakaita)? Chikonzero ndechekuti kana ndichitaura nezveimwe saiti ine crappy ruzivo pairi, handidi kuisimudzira zvakanyanya. Kwete sekudzora (kana ini ndichireva, toti, maonero ezvematongerwo enyika akasiyana zvakanyanya neangu, asi kana akavakirwa zvakanaka uye akaiswa zvakanaka, ini handina dambudziko nekuisimudzira), asi senzira yekurwisa entropy nekuchera pasi. crappy content.
Ini handina dambudziko nemaoko kugadzirisa zvinongedzo. Ini ndinowanzo gadzirisa macomments kuti ndiwedzere Google Analytics inobuda link, link mazita uye kugadzirisa vashanyi matypography, asi zvingave zvakanaka kuti uite otomatiki kusvika pamwero wakati.
Kukadzi 24, 2007 na6:52 PM
Chokwadi, theUg! Unogona kuwedzera rel="nofollow" mukati mechero link yausingade kuti Google iite chinzvimbo. Muenzaniso:
Kukadzi 24, 2007 na7:22 PM
Ehe, zvingave nyore pane kuedza kudzidzima. Ndinochengeta zvese zvinogaro shandiswa sezvizvi muManotsi angu eOpera? (zvinonyatso batsira kuva nezvimedu, zvimedu, uye zvimedu zvekodhi mukati mebrowser yako nguva dzese), saka zvinongori zvekungokopa-namira kwandiri.
Feb 28, 2007 at 12:55 PM
Ndakawana izvi. Aifanira kunge akatarisa usati wakubata nefoni fomu.
Ndinobvumirana naDoug. Kana iwe uchienda kune dambudziko rekuverenga uye kuyera yega yega mhinduro zvakadaro (zvaunofanirwa kunge uri) saka zvine musoro kupa mubairo wechokwadi chechokwadi chinongedzo.
Iwe uchawana mamwe "Makuru post" makomendi semhedzisiro, asi iwo anoenda akananga mubhini recycle zvakadaro.
Iwo ma spammers ari pachena ane mazita se "SEO nyanzvi" kana "Webhu dhizaini Atlanta" kana chimwe chinhu kiyi yakarodha. Vaya vechokwadi vanowanzova nemazita chaiwo sa "Lisa" kana "Robert".
Zvakanaka kuti wakamira pane iyo no yekutevera nyaya. Pane zvawataura pamhedzisiro? Wakawana zvawanga uchida here?
Mhedzisiro haizove yakakosha kwandiri sezvo ichave semi vanhu! Kutaura nezvesaiti yangu kunofanirwa kubatsira mune yako Google masanji.
Ini ndinomhanyisa webhusaiti yeDrupal-powered, saka inoisa pasina rel=nofollow, uye unofanirwa kuisa plugin kuti uwedzere izvi. Ini ndanga ndichida kuita izvi kwekanguva, asi ndakaona kuti chikonzero chega chekudaro ipfungwa yekuti mameseji andiri kusiya pane mamwe mawebhusaiti evamwe vanhu haasi kundipa peji renji, pandiri kuvapa peji renji. Ndakafunga kuzvisiya sezvazviri.
Vanhu vazhinji vanoenzanisa zvavanotaura saka sei vachiranga avo vanotora nguva yekusiya mhinduro inobatsira pane saiti?
Ini ndawedzera chirevo chekutaura kune yangu saiti kuti ndisazonzwa zvakashata nekudzima macomments ari munzvimbo yegrey.
Semuenzaniso, kana mumwe munhu akasiya chirevo chinoti "yakanaka saiti", ini ndinofunga kudzima chirevo, kunze kwekunge vasiya iyo URL isina chinhu. Pasina mutemo wakadaro, ndakanzwa ndichimanikidzwa kutarisa chinongedzo uye kusarudza zvichibva pane saiti.
Ndatenda neruzivo, ndirikuda kuziva.
vamwe vanhu vanoti mapeji acharamba akaiswa indexed kuburikidza neiyo kwete yekutevera tag. ichokwadi here ichi?
Hongu, hadzisi dzese injini dzekutsvaga dzinoremekedza kwete-kutevera. Zvinongoitika kuti Google, iri mukomana mukuru pane block, inoita zvakadaro. Handina chokwadi nezve Live, Bvunza kana Yahoo! Zvinogona kutora kuchera kuti unzwisise.
Basa rakanaka - I'm zvakanyanya anti-nofollow.
Chero chinongedzo chinofanirwa kuverengerwa, kana kuti haufanire kubvumira chinongedzo kuti chivepo. Ndinoziva nezvevanhu vanoisa nemaune nofollow kune zvinongedzo mukati mezvinyorwa zvavo kuitira kuti vasazove nematani ezvinobuda kunze, nedzidziso yekuti mawebhusaiti anobatanidza kupfuura iwo akabatanidzwa kuti awane yakaderera PR.
Isu takaita zvimwe chete pablog yedu yenhau pasina chimwe chinhu kunze kwemhedzisiro yakanaka maererano nemipiro yemushandisi uye muto wejinjini yekutsvaga. 🙂
Jul 16, 2007 pa 7: 34 AM
IMO rel = "nofollow" haina basa zvachose, haimise kutaura spam nekuti spammers vanoshandisa software. Mhinduro yakanakisa inopesana nekutaura spammers mapulagi seAkismet, Bad Behavior uye captchas kana mibvunzo yevanhu.
Jul 22, 2007 pa 3: 01 AM
hongu? mawiki akapusa iwayo!
hameno kuti chii chinoitika kana tese tikashandisa nofollow kwavari?
Jul 29, 2007 pa 3: 30 AM
Mhoroi, ndinoda kubvunza kana WordPress, Yahoo 360, Blogger, nezvimwewo vachishandisa “nofollow” muzvinyorwa zveblog. kureva kuti kana ndikanyora chinyorwa mubhurogi rangu uye ndikaisa chinongedzo mairi, chinongedzo chiri mutsamba yangu chinoshanduka kuita rel=nofollow?
Aug 6, 2007 na10:50 PM
Ndatenda zvikuru nechinyorwa chakanakisa nezve iyo kwete yekutevera hunhu. Nekuti yakaiswa seyakagadzika muWordPress, ndinofungidzira kuti vanhu vazhinji havatomboziva kuti iripo.
Ini ndinofunga mutemo wekubvumira kana kurambidza zvirevo pamunhu pane kungodzikisira ese inzira iri nani.
Aug 15, 2007 na3:00 PM
Ndatenda nekuda kwechinyorwa ichi! Ndinoziva kuti ndanonoka kuiwana, asi ndangotanga kubhuroga uye ndiri kuyedza kufunga kuti sei iyo heck wordpress iri kuisa nofollow mumalink angu. Ini ndichaisa dofollow nekuda kwekutsvaga bhurogi rako, pamwe izvo zvinokurudzira mamwe makomendi nekudyidzana pane yangu nyowani blog.
Handina chokwadi kuti yakawanda sei inobatsira zvakananga nekutora chikamu. Ini ndinofunga, zvakadaro, kuti 'shiri dzemunhenga dzinobhururuka pamwe chete' saka iwe unonyanya kukwanisa kubatana uye kutora chikamu nemamwe mablogi asingashandisi nofollow. Mukufamba kwenguva, ndinofunga kuti pane zvinobatsira.
Ini ndinongozvifarira nekuti ndinotenda kuti kwakawanda kwekubudirira kwangu mukubhuroga kwave kuitirwa kutora chikamu kwevanhu vakaita sewe muhurukuro. Sei ndichifanira kuwana rubatsiro rwese?!
Aug 26, 2007 na6:58 PM
Ndatenda neruzivo urwu Doug, ndanga ndichiwedzera rel tag kumalink angu asi handina kumbofunga nezve nzira iyi yekutaura. Zvine musoro zvakadaro, ini ndichatanga kuita izvi sezvo ini ndatove nemwero wekutaura kwangu kusvika padanho rakakura.
Mhoroi, ndakaisa DoFollow plugin mazuva mashoma apfuura, uye ndakagamuchira kuvonga kubva kune mamwe mablog madiki andakabatanidza muzvinyorwa zvangu uye makomendi.
Chirongwa chikuru zvakare, asi CHETE mukubatana nechakasimba chekutaura / mushandisi manejimendi, zvikasadaro mablogiki anozoita spam masosi nekukurumidza kupfuura isu kufunga.
Zvita 13, 2007 na8:31 PM
Doug, ichi nofollow chinhu chave chinorwadza kune vese blogger uye legit commentator… ndinongoti dai mumwe munhu akagadzira plugin inogonesa/kudzima nofollow pakuda kweadmin. ese ma nofollo plugins ndakashandisa kubvarura iyo nofollow tag pane ese makomendi uye/kana mutauri. sezvamakataura, vamwe vanhu vanosarudza kubvumidza zvakataurwa nevashandisi vavo
Ndinobvuma, Jessie! WordPress yakawana mhinduro inonzwika uye yakajeka, asi ndinofunga vangave vari pasi pekumanikidzwa kubva kuInjini dzeKutsvaga kuti vasaite iyo sarudzo.
chinosekesa chinhu doug ndechekuti ruzhinji rweavo "vanotsigira" nofollow vane nofollow attribs munzvimbo dzavo / mablog…. Hazvinakidze here kuti vanhu vanotaura chimwe chinhu voita chimwe? ndakayemurwa nekuva nedofollow pano sezvakangoita mublogi rangu… handina chokwadi chekuti izvi zvichakanganisa sei PR yangu mugoogle.
Feb 3, 2008 at 3:42 PM
Ndinokutendai nekutsanangura izvi. Ndiri kungotanga webhusaiti, uye ndiri kutarisa kune ese mabhurogu sarudzo. Nehurombo iyo yemagaba blog software yandaigona kushandisa nesaiti yangu inonhuwa pachando, uye ndanga ndichifunga kushandisa wordpress, saka ndatenda nekutaura nezve yekutevera kana kusateedzera nyaya. Ndine 2 mawebhusaiti, imwe isina google back links, uye rimwe zuva saiti yangu yechipiri yakaratidza 10 google backlinks kunze kwebhuruu, uye ndakafara chaizvo! Ndinonyora pamabloggi nguva dzose uye ndakanga ndisingazivi kuti iwe unogona kuwana chibatanidzo nenzira iyo, (duh, newbie!) Ndakatevera chinongedzo ichidzokera kune saiti yake ndikaona kuti yaive imwe yeakawanda akawanda mabloggi andaive ndatumira pairi, thanks Miracle, CHAive chishamiso !!! Ipapo ndakashamisika kuti zvakanga zvaitika sei, uye nei zvakanga zvisati zvaitika! Saka ikozvino ndazviwana. Kana ini ndawana yangu blog software kumusoro ini ndichave neiyo yekutevera, kwete iyo kwete- yekutevera mhando. Pane budiriro yakakwana kwatiri tese…..